fantsom-bovoka fantsom-pifandraisana ho an'ny fifandraisana faran'ny fivoriambe
Home / Applications / Induction Brazing / fantsom-brazing mankany amin'ny faran'ny fantsona
Sokajy: Applications, Induction Brazing, induction brazing machine Tags: pipaza mirehitra, fampandehanana fantsom-baravarankely fampitomboana, induction brazing connexion, Induction Brazing Machine, induction brazing pipe, rafitra fantsom-brazing fantsom-borona, serivisy fanetren-tena, fantsom-baravarana fantsom-borona, fantson-drano mikotrika, vondron-trano fandrobohana, fantsona handrindrana fantsona
Induction brazing fantsona handrindrana ny fifamatorana fantsom-pifandraisana.
Ny halavan'ny fika dia miovaova amin'ny 39.3 ″ (1m) ka 236.2 ″ (6 m).
DW-UHF-10KW milina fanosihosy famokarana basy
Temperature: Manodidina ny 1382 ° F (750 ° C)
Time: 1 minitra ka hatramin'ny 30 segondra eo ho eo
Valiny sy famaranana:
Ny halavan'ny faran'ny fantsona dia miovaova manomboka amin'ny 1.57 ″ ka hatramin'ny 3.94 ″ (40mm ka hatramin'ny 100 mm) ary ny halavan'ny fantsom-boninkazo dia miovaova amin'ny 3.28ft ka hatramin'ny 19.685ft (1m ka hatramin'ny 6 m). Ny halavan'ny vodin-tany dia mety hahatratra hatramin'ny 0.28 maximum (7 mm) farany ambony amin'ny ho avy.
Fepetra takiana kalitao: ny lozam-pifamoivoizana, ny lavaka rehetra, ny tsipika mifangaro ao amin'ny faran'ny anatiny ary ny tsipika iraisana amin'ny OD an'ny fantsona dia tokony ho tototry ny famenoana brazing.
Ny fiarahana dia manana fepetra takiana ara-batana koa.
Hanoro anao anay ny masontsivana farany ary koa ny fitakiana vy sy metaly fika ho an'ny fiarahan'ny brazed sy ny fametahana azy, raha misy izany. Tsy hitovy ny halavany. Ny hatevin'ny fantsom-bozaka dia mety hahatratra hatramin'ny 1.97 ″ (50 mm) ambony indrindra.
Tube vy mifangaro vy mankany amin'ny fantsona varahina miaraka amin'ny heater induction